जिमेल, गुगल र युट्युबमा समस्या ! - नेपालबहस
जिमेल, गुगल र युट्युबमा समस्या !
| १४:१६:४७ मा प्रकाशित
४ भदौ, काठमाडौं । इन्टरनेट प्रविधि कम्पनी गुगलमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । कम्पनीको जिमेल सर्भिस र गुगल ड्राइभ बिहीबार चल्न सकेको छैन् । जिमेलमा बुधबारदेखि नै विश्‍वभर समस्या रहेको प्रयोगकर्ताले बताएका छन् ।
जिमेलमा फाइल एट्याच नहुने समस्या रहेको प्रयोगकर्ताको भनाई छ । यसबारेमा प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत गुगलसमक्ष गुनासो गरेका छन् । गुगलकै कारण युट्युबमा समेत भिडियो अपलोड हुन नसकेको भनाई छ ।
गुगलले यसबारेमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
इन्टरनेट समस्याले टोलटोलमै पुगेर विद्यार्थी पढाउँदै शिक्षक १ दिन पहिले
अस्ट्रेलियामा फेसबुक, गूगलका सन्दर्भमा कानुनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव १ हप्ता पहिले
सुदूरका नौ वटै जिल्लामा फोर जी इन्टरनेट सेवा विस्तार १ हप्ता पहिले
मिथ्या सूचनाको स्रोत सामाजिक सञ्जाल २ हप्ता पहिले
हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध पछि सामसुङले जित्यो ६ अर्ब ६० करोड डलरकाे अमेरिकी ठेक्का ३ हप्ता पहिले
सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक ३३ मिनेट पहिले
बागलुङमा ७ हजार ८ सयले गरे कोरोना बीमा ४६ मिनेट पहिले